एक जनाको कारण सिङ्गो प्रहरी सस्थानको बद नाम ! दिउसै काठमाडौं मै यस्तो ह,र्कत देखाए प्र-हरीले(भिडियो) – Bannigadhi Today
एक जनाको कारण सिङ्गो प्रहरी सस्थानको बद नाम ! दिउसै काठमाडौं मै यस्तो ह,र्कत देखाए प्र-हरीले(भिडियो)
धनराज साउँद २०७७ असार १४, आईतबार ०७:२२
हामी समस्यामा पर्यौं भने सबैभन्दा पहिला सम्झने प्रहरीलाई नै हो । जताको सेवाका लागि सरकारी तलब खाएर बस्ने प्रहरीनै जनता लु,ट्न थाले भने के होला ? असार ७ गते दिउँसो ३ बजे न्यूरोडको एक क्यामेरा पसलमा त्यस्तै घ,टना भयो । हुन त यो घटना रहस्यमय भएको छ । घट,नाका अन्य पाटा पनि खुल्दै गएका छन् । तर क्यामेरा पसलका ब्यवसायीवाट १० लाख रुपैया लु,टेर लैजाने दुई जना प्रहरी नै भएको प्रहरी अनु,सन्धानवाटै पत्ता लाग्यो ।
न्युरोडमा क्यामेरा पसल संचालन गर्ने विकास अग्रवालले १७ लाख रुपैया बैंकवाट झिकेर ल्याएका थिए । उनले पैसा झिकेर ल्याएको थाहा पाएका दुई जना दिउसो करिब ३ वजे उनको पसलमा पुगे अनि ध,म्क्याएर १० लाख रुपैया लिएर गए ।
मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले आफ्नो १० लाख रुपैया लगेको भन्दै उनले प्रहरीमा उ,जुरी दिए । उनले त्यो पैसा बुवाको शल्य,कृया गर्न बैंकवाट निकालेको बताएका छन् । तर प्रहरी अनुसन्धानमा उनी पनि हुण्डि ब्यापारी पनि भएको प्रारम्भिक कुरा खुलेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवामा उ,जुरी पुगेपछि भएको अनुसन्धानका क्रममा त्यसरी पैसा लु,टेर लैजाने दुई प्रहरी कर्मचारी भएको खुलेको हो । भिडियो हेर्नुहोस
क्याटेगोरी : मुख्य समाचार, रोचक, समाचार, समाज